Tọzdee, Febụwarị 8, 2018 Friday, February 9, 2018 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị jụọ mmadụ iri na abụọ ahịa gị n'ụlọnga nwe ihe ha na-eme, ma ha na-eto eto, na otú ha si erite uru na ọrụ ha na-enye… M pụtara ụfọdụ ị ga-enweta iri na abuo dị iche iche azịza ọ bụla. Enwere m obere obi abụọ na anyị niile hụrụ ihe anyị na-eme maka ndị ahịa anyị aka, mana anyị niile na-ahụ ụzọ anyị dị mma ma na-eduga na ntụzịaka ahụ.
The 2018 RSW / US Marketer-Agency New Year Outlook Infographic dabere na nyocha anyị kachasị ọhụrụ, ma lekwasị anya n'akụkụ abụọ nke ụlọ ọrụ ahụ: nke mbụ, ọ na-egosi etu ndị ahịa na ụlọ ọrụ si bụrụ, ihe ịtụnanya, na-esonye aka n'ihe metụtara isi nsogbu achọpụtara, mmụba mmefu ego, na atụmanya itinye ego na nke abụọ, na-egosi isi ihe ole na ole na-eme ka ụlọ ọrụ gị mara.
Gini mere ị ga-eji goro ọrụ?
Ndị ụlọ ọrụ nwere elele bara ụba nke ụlọ ọrụ enweghị ike ịha nha. Dị ka ihe gị n'ụlọnga, M na-ekwesịghị ịdị na-enwe nchegbu banyere ọfịs na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọrụ si na-arịa ọrịa, ọrụ ntụgharị, ma ọ bụ ndị ọzọ ụbọchị nke ọzọ okwu na-akwụsịlata ụlọ ọrụ. N'ezie, nke ahụ abụghị igwu ụlọ ọrụ. Enwere uru nke ndị otu na akụrụngwa dị n'ime.
Mgbe anyị na ụlọ ọrụ na-aga n’ihu, anyị na-arụ ọrụ dị elu karịa n’ihu ma mezie uru anyị bara n’ihu. Ndị ụlọ ọrụ nwere ekele na anyị nwere ọkaibe na ha chọrọ oge ụfọdụ. Ọ bụ nnukwu mmekorita.
Ihe niile, maka ụgwọ nke otu ndị ọrụ ma ọ bụ abụọ, ị nwere ike ịnweta otu otu na ụlọ ọrụ. Ọ bụghị oge niile, n'ezie, mana ịnweta obere oge nke ọtụtụ okike nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ azụmaahịa gị.
Ọ bụ ya mere ozi akwụkwọ ozi a sitere na RSW / US abụghị n'ezie ihe ịtụnanya. Anyị na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ ọnụ ụbọchị ọ bụla ma anyị na ha nọ n’ime mkpọchi iji hụ na ha hụrụ nnukwu mbịaghachi na azụmaahịa ahịa ha. Anyị na-etinye ego na teknụzụ n'ihi na anyị nwere ike gbasaa ụgwọ ndị ahụ n'etiti ọtụtụ ndị ahịa. Ọ bụ ya mere anyị ji enwekarị ngwaọrụ na nyiwe kachasị mma iji rụọ ọrụ site na iji ya atụnyere ndị ahịa anyị - ọ bụ ọrụ anyị nwere ike ịgbatị ha.
Tags: gị n'ụlọngagị n'ụlọnga emefuịma akaahịa dijitalụ na-emefuire ahiaOgboelekọta mmadụ media na-emefutalentọdịnala ọdịnala na-emefuọnọdụ
Mgbasa ozi Podcast Na-abịa Afọ